Wuxuu ku dhashay 29-kii Maarso, 1966 Puerto Real, magaalo xeebeed ku taal gobolka Cádiz, koonfurta Spain, oo ku jirta laabta qoys weyn oo is-hoosaysiiya oo dadaal badan.
· Markii aan jiray sideed jir waxaan ku biiray La Salle de Puerto Real school rondalla, oo ah iskuul aan ku soo qaatay waxbarashada aasaasiga ah. Agaasimeheeda iyo macallinkeeda, Don Pedro Álvarez Hidalgo ayaa i baray inaan ciyaaro baandada.
· Anigoo toban jir ah ayaan barashadaydii biyaano ka bilaabay Manuel de Falla Royal Conservatory of Music ee Cádiz, anigoo kaga tegey Fasalka Dugsiga Hoose oo aan mar kale qaatay markii aan qaan -gaadhay ilaa aan dhammaynayo Wareegga Koowaad ee Fasalka Dhexe.
· Waxaan ahaa arday laxamiistaha, macallinka iyo pianist -ka reer Cádiz Luis Felix Parodi.
· Waxaan ku bartay Taariikhda Muusikada iyo Sayniska Jaamacadda Virtual ee La Rioja.
· Waxaan haystaa diblooma ku takhasusay muusigga anigoo ah macallin dugsi hoose.
. Intii lagu jiray sannad -dugsiyeedka 2015/2016 waxaan dhammaystiray oo dhammaystiray daraasadaha Orchestration Film -ka ee ThinkSpace Academy onlayn, anigoo ku tirinaya macallimiintayda qabanqaabiyayaasha iyo halabuurrada caalamiga ah sida Charles Fernández iyo Milton Nelson iyo kuwo kale.
. Wuxuu ka qalin jabiyay Muusikada Jaamacadda Caalamiga ah ee La Rioja (UNIR) sanadkii 2.018
. Koorsada Farsamaynta Maqalka ee Marc Dieter Einstmann (Injineerka xirfadda u leh fannaaniinta sida Annie Lenox, Depeche Mode ama U2 si aad u magacowdo dhowr) Farsamooyinka Muusigga Casriga ah I oo leh laxamiistaha Talyaaniga Gabriele Vanoni; Berklee Online 2.020
Tababar iyo waxqabad is-baray sida pianist-keyboardist.
· Waxaan ahay qof is-baray qalab badan.
. Waxaan ku dhammaystiray waxbarashadaydii cavaquinho ee akadeemiyadda Levino Ferreira Lúcio Socrates (oo uu awoowe u yahay macallinka Frevo Levino Ferreira) ee Recife- Brazil
· Waxaan ka mid ahaa qaababkii muusikada ee kala duwanaa: soloist hoteellada, duo, trios, orchestras muusikada qoob -ka -ciyaarka, kooxaha Sevillanas, dhagaxa maxalliga ah iyo fanaaniinta pop -ka iyo weheliyaha soo -jeedintooda El Puerto de Santa María ee heesaha Eurovision Eva Santamaría.
· Kooxihii maxalliga ahaa ee aan ka qaybgalay.
· Ballan -qaadyada dhallinyarada ee heesta Isbaanishka.
· Laga soo bilaabo shirkadda tiyaatarka Sevillian La Tarasca ee “La hora de la runtii” iyo “Robinson Crusoe”.
Sannadkii 2003 waxaan daabacay albumkaygii ugu horreeyay: MIRADORES (eeg daahfurka). Shaqadani waxay ka dhalatay dhowr sano oo ururinta fikradaha iyo danaha muusikada. Waa album kala duwan oo qaabab aad u kala duwan la isugu daray.
Waxaan ka qaatay magaca masraxa berekekê hees cajiib ah oo uu qaaday fannaanka iyo laxamiistaha waqooyi -bari Brazil, Geraldo Azevedo iyo José Carlos Capinam. Heesta xurmaynaysa Amazon oo aan dareemay in la aqoonsaday. Cilmi -baaristii ugu dambeysay ayaa muujisay in asalka eraygu uu ka yimid luqadaha Bantu, oo ay ku hadlaan in ka badan 200 milyan oo Afrikaan ah iyo in uu yahay onomatopoeia loo isticmaalo jaridda nooc ka mid ah raha u dhashay qaaradda Afrika.
Faasaska stylistic ee muusigaygu wuxuu ku wareegsan yahay saddex xarumood: tababbarkayga caadiga ah, danaha aan ka leeyahay waxa loogu yeero muusigga adduunka, iyo elektiroonigga oo ah aalad shaqo. Dhammaan curiyayaashaydu waxay ka dhasheen miro tiknoolajiyadda ugu horumarsan ee kiiboodhka shaqada. Muusigaygu waa qalab.
Waxaan ahay fanaan madaxbannaan, oo aan lahayn heshiis rikoor ah.